Phakathi kweVillarrica kunye nePucón !!
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguCamilo
Iindawo ezinomdla: Villarrica, Pucón, Huerquehue National Park, Ojos del Caburgua, Villarrica Lake, Villarrica Volcano, Lican Ray, Panguipulli, Valdivia, Temuco, Huilo Huilo .. Uya kuyithanda indawo yam yeCabin efanelekileyo kwiintsapho ezinabantwana. Okanye abo bafuna nje ukuphumla kwimekobume yasemaphandleni, neegusha, iintaka eziculayo, uhlaza oluninzi, ihlathi, neekhilomitha ezimbalwa ukusuka elunxwemeni, ukusuka kwisixeko saseVillarrica nasePucón. Ukuqhubela phambili kwesinye isikhangiso sam esibizwa ngokuba "Phakathi kweVillarrica kunye nePucón".
Ikhabhinethi yabantu abane enamagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlambela elinye. Ilungele iintsapho ezinabantwana abancinci abafuna ukuzola kwindawo enkulu kwaye iqhagamshelwe kakuhle kwisixeko kunye neendawo ezikhenkethayo.
4.76 · Izimvo eziyi-113
Yindawo ezolileyo kakhulu. Kufana nokuba nelizwe esixekweni. Ekuseni uvuka uva intsholo yeentaka okanye yeegusha. Ungafumana isidlo sakusasa ethafeni ukonwabela idlelo elihle kwaye ebusuku ungajonga ubukhulu besibhakabhaka kunye neenkwenkwezi.
Umbuki zindwendwe ngu- Camilo
Ungandiqhagamshela nge-wsp xa kukho nawuphi na umbuzo okanye nantoni na endinokukunceda ngayo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Villarrica